USA: Baaritaanka xiriirka Trump & Ruushka oo lugaha la galay Imaaraatiga • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / USA: Baaritaanka xiriirka Trump & Ruushka oo lugaha la galay Imaaraatiga
USA: Baaritaanka xiriirka Trump & Ruushka oo lugaha la galay Imaaraatiga
March 20, 2018 - By: Khalid Yusuf
Waxaa sii balaartay baaritaanka uu wado Robert Mueller Xeer illaaliyaha khaaska ah ee loo saaray baaritaanka dalalka shisheeye ee faro-gelinta ku sameeyeen doorashadii Madaxweynaha Maraykanka ee 2016.
Waxaa hada baaritaanka Mueller uu eegayaa xiriirka ka dhaxeeyey Nin ganacsade ah oo u dhashay dalka Lubnaan kaasi oo lagu magacaabo George Nader, ninkan ayaa ah gacan-yaraha iyo lataliyaha hogaamiyaha Imaaraatiga Maxamed bin Zayed Al Nahyan.
Ninkan oo dhinaca kale xiriir laleh Ruushka ayaa intii uu socday ololihii doorashada kulamo la yeeshay xubno kamid ah kooxda Donald Trump.
Inkastoo xeer illaaliyaha khaaska ah baaritanka uu wado uu diirada ku saarayey dalka Ruushka ayaa waxaa hada muuqata in dalka Imaaraatiga uu kamid noqonayo baaritaanka socda maadaama la rumeysan yahay inuu dalkaasi saameyn ku lahaa doorashadii Donald Trump iyo inay dhaqaale si qarsoodi ah Imaaraatiga kusiiyey kooxda u ololeenaysay Trump.
Burburinta Jaamacada Carabta iyo GCC
Ganacsadahan George Nader ayaa la sheegay in kahor doorashadii Maraykanka uu qaban qaabiyey shir qarsoodi ah oo ay ka qeyb galeen qaar kamid ah hogaamiyayaasha dalalka Carabta gaar ahaan xulafada Sacuudiga.
Shirkaasi qarsoodiga ah oo sanadkii 2015 ka dhacay dusha Markab uu leeyahay Ganacsadahaasi oo ku sugnaa bada Cas ayaa waxaa la sheegay inay kulankaasi ka qeyb galeen hogaamiyaha Imaaraatiga Maxamed bin Zayed Al Nahyan, Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salamaan, Boqorka Urdun Cabdullahi, Madaxweynaha Masar Cabdifatax Al Sisi iyo Dhaxal-sugaha Baxreyn Salman bin Hamad.
Shirkaasi qarsoodiga ayaa looga hadlay in dalalkaasi Imaaraatiga, Sacuudiga, Urdun (Jordan), Masar iyo Baxreyn ay sameystaan Gole u gaar ah oo ka baxsan ururada ay kamid ahaayeen ee Jaamacada Carabta iyo Golaha Khaliijka ee GCC. Nader ayaa ku taliyey in Liibiya lagu soo daro kooxdaasi, walow shirkaasi aysan ka qeyb gelin xubno ka socda Liibiya.
George Nader ayaa la sheegay inuu shirkaasi ka sheegay inuu ka ololeyn doono Maraykanka sidii Golahaasi lagu taageeri lahaa isagona xiriiro kala duwan la sameeyey kooxda ololaha ee Donald Trump oo xiligaasi murashax ahaa.
Hogaamiyayaasha Carabta ee shirkaasi ka qeyb galay ayaa soo dhaweeyey taladaasi ay ku dhisanayaan gole ay ku bahoobeen wadamadaasi.
Qorshaha dalalkan ayaa ahaa inay sameystaan Isbaheysi u gaar ah oo ay kula dagaalamaan wadamada Turkiga iyo Iran.
Xogtan soo shaac baxday ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato xiriirka dalalka xubnaha ka ah Jaamacada Carabta & GCC.
Baaritaanka ku socda Donald Trump ayaa dhici karta in ay kusoo shaac baxdo dhaqaalihii Sacuudiga iyo Imaaraatiga siiyeen Donald Trump xiligii uu doorashada ku jiray.
Erik Prince iyo Imaaraatiga
Xeer illaaliyaha Mueller ayaa la sheegay inuu baarayo shir kale oo qarsoodi ah oo ka dhacay Jasiirada Seychelles oo ay ka qeyb galeen Amiirka Imaaraatiga, Eric Prince oo ah maalqabeen xiriir laleh Imaaraatiga iyo Trump, waxaana shirkaasi ku wehliyey Ganacsato Ruush ah oo xiriir dhaw leleh Vladimir Putin, shirkaasi qarsoodiga ah ayaa looga hadlay doorashadii Maraykanka.
Erik Prince oo ka tirsanaan jiray Komaandooska Maraykanka, ayaa ah ninkii aasaasay shirkada tababarta ciidamada calooshood-ushaqeysataasha ah ee Blackwater oo danbiyada dagaal ka galay dalka Ciraaq, wuxuuna ninkaasi shirkadiisa maamushaa hawlaha Imaaraatiga ka wado qaar kamid ah dalalka Afrika sida Soomaaliya iyo Eritrea.
Wuxuu Erik Prince ku lug lahaa shirkadii Sarancen ee dhistay ciidamada Badda Puntland ee imaaraatiga maalgeliyey.
Wuxuuna dhawaan qanadaraas Malaayiin dollar ah ka helay Hay’ada Sirdoonka Maraykanka CIA kadib markii uu Trump xilka qabtay.
Mr.Prince oo kasoo jeeda Qoys maalqabeen ah ayaa kamid ah xubnihii lacagta ku taageeray xisbiga Jamhuuriga iyo Trump xiligii doorashada, waxayna wada dhasheen haweenayda Trump uu u magacaabay Wasiirka Waxbarashada Betsy DeVos.
Sacuudiga & Imaaraatiga
Labadan dal ayaa taageeray go’aanadii uu qaatay Donald Trump sida xayiraadii uu kusoo rogay socdaalka dadka u dhashay Lix wadan oo Muslimiin ah oo ay ku jirto Soomaaliya.
Imaaraatiga iyo Sacuudiga ayaa la rumeysan yahay inay si hoose u taageereen go’aankii Trump ku sheegay inuu u aqoonsaday magaalada Qudus caasimada Israel.
Sacuudiga ayaa dowlada Trump u saxiixay heshiis gaaraya 100 bilayn oo ay hub uga soo gadanayaan shirkadaha laga leeyahay Maraykanka.
Trump ayaa isaguna taageeray xayiraada ay dalalkaasi saareen wadanka Qatar, wuxuuna todobaad kahor shaqada ka eryey Xoghayihiisii Arrimaha Dibada Rex Tillerson oo ka horyimid xayiraada Xulafada Sacuudiga saareen Qatar.
Wuxuu Trump sidoo kale taageero u fidiyey dagaalka ay Imaaraatiga iyo Sacuudiga ka wadaan dalka Yemen.
Dowlada Maraykanka oo baaritaan ku bilowday shirkada Boeing
Faah-Faahin:Weeraradii Masaajidada New Zealand